हङकङबाट फर्के लगत्तै भुवन केसी प्रहरी फन्दामा पर्ने ! | My News Nepal
हङकङबाट फर्के लगत्तै भुवन केसी प्रहरी फन्दामा पर्ने !
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं अहिले नायक भुवन केसी र निर्माता सुवास गिरीको पर्खाइमा छन् । यी दुवै निर्माता रहेको फिल्म ‘कृ’मा राखिएको पुरानो फिल्म ‘सम्झना’को ‘उकालीमा अघिअघि।।’ बोलेको टुक्रे गीत अनुमति नलिई राखेको भन्दै परिसरमा निवेदन आएपछि प्रहरी अहिले केसीलाई कुरेर बसेको छ ।
भुवनले छोरा अनमोल केसीको अभिनय रहेको ‘कृ’का लागि आफूले खेलेको लोकप्रिय फिल्म ‘सम्झना’को लोकप्रिय गीतको एक टुक्रा प्रयोग गरेका थिए । ‘कृ’मा रहेको ‘धेरैपछि सम्झना, आँखा छोपी बसन’ बोलको गीतमा ‘उकालीमा अघिअघि’को टुक्रा पुरानै धुनमा समावेश गरिएको छ । अनुमति नै नलिई गीत राखेको भन्दै ‘सम्झना’ फिल्मका निर्देशक शम्भु प्रधान प्रहरी कार्यालय पुगेका हुन् । युट्युबमा राखिएको सो गीतको भिडियोमा रिमिक्स गीतको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
ओरिजिनल म्युजिक भनेर रञ्जित गजमेरलाई क्रेडिट दिइएको छ भने रिमेक म्युजिकमा अल्मोडा राना उप्रेतीको नाम छ । रिमेक गीतको शब्दमा अल्मोडा र सविन एकतारेको नाम छ । ‘कृ’को टिम अहिले नेपाल बाहिरका दर्शकलाई सो फिल्म देखाउन विदेश भ्रमणमा छ । केसीका बाबुछोरा अहिले हङकङमा छन् ।
भुवनविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी लिएर पुगेका प्रधान कुनै समय भुवनकै गुरु हुन् । विवादमा तानिएको बोल समेटिएको पुरानो फिल्म ‘सम्झना’मा भुवनले अभिनय गरेका थिए । प्रधान केही हप्ताअगाडि उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । प्रहरीले जाहेरी अगाडि दुवै पक्षलाई राखेर सहमतिको प्रयास गर्यो तर कुरा मिलेन । सहमति हुन नसकेपछि प्रधानले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी छाडेर आएका छन् । (नागरिक )